Goobaha Khadka Tooska ah ee Uzbekistan - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
Loading ... Kaqeybgal nooc kasta oo khamaar ah waa laga mamnuucay Uzbekistan. Joojinta ganacsiga khamaarka ee dalka wuxuu bilaabmay 2002, markii barkada la mamnuucay. Dabcan, bilyaardigu maahan ciyaar dhameystiran oo jaanis ah, laakiin tusaalahani wuxuu si fiican u muujinayaa sida dhab ahaan hogaaminta Uzbekistan ay uga tirsan tahay warshadaha khamaarka guud ahaan. Xisbiga haya talada dalka ayaa sheegay in ganacsiga khamaarka iyo horumarkiisa aysan ku habboonayn ruuxa dadka Uzbekka ah wuxuuna matalayey dhiirigelin xoog leh oo ku aaddan hawlaha dambiyada.
Kadib, 2003-2004, sharci ayaa la soo saaray si loo xakameeyo khamaarka hadhay, kaas oo inta badan lagu kariyo xarumaha shaqada, halkaas oo aad ku guuleysan karto lacag. Si kastaba ha noqotee, 2007 Madaxweynaha Uzbekistan wuxuu soo saaray amar gaar ah oo uu ku mamnuucayo qolalkaan ciyaaraha dhawaa. Halkaas ayaa lagu joojiyay dhaqdhaqaaqyadii khamaarka ee sharciga ahaa ee ka jiray Uzbekistan.
Maadaama khamaarka uu sharci daro ka yahay Uzbekistan, sida kaliya ee dadka deegaanka ay ugu raaxeysan karaan ciyaarta ayaa ah inay ka helaan xulashooyinka khamaarka internetka. Dabcan, waxqabadyada goobaha khamaarka internetka ee Uzbekistan sidoo kale waa sharci darro, laakiin Uzbeksku ma heli karaan marin ay ku yeeshaan goobaha khamaarka shisheeye oo ay halkaas ku ciyaaraan.
Ikhtiyaar kale ayaa ah helitaanka naadiyada khamaarka ee khadka tooska ah ee ka jira dhammaanba jamhuuriyadihii hore ee USSR. Xaaladda sharci ee badankood lama hubo. Naadiyadani waxay siiyaan dadka soo booqda kombuyuutarrada marinka internetka, kuna xiran dhowr goobood oo khadka tooska ah lagu ciyaaro. Dabcan, nashaadaad noocan ah waa sharci darro mana waafaqsana sharciga qamaarka internetka ee Uzbekistan, naadiyadan iyo milkiilayaashooda oo ay xukumaan mas'uuliyiinta. Tiradoodu way yaraanaysaa, waxayna u badan tahay inay mustaqbalka dhow noqon doonaan bogga kaliya ee taariikhda khamaarka ee Uzbekistan.
Eeg liiska boggaga internetka ee casino ee aqbala ciyaartoy ka socota Uzbekistan, oo bixiya ciyaaro tayo sare leh oo ammaan ah. Halkan waxaad ka heli doontaa madadaalo ballaadhan oo ka bilaabanta mashiinnada ciyaarta ilaa ciyaaraha khamaarka oo ka nool kuwa iibiya barnaamijyada caanka ah sida NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, Rival Gaming, iyo kuwo kale oo badan.
Uzbekistan - waa hanti dhab ah oo ka mid ah Bariga qadiimiga ah ilaa Bartamaha Aasiya. Dhadhan aan la barbardhigi karin, cuntada caanka ah ee Uzbek pilaf oo in ka badan 1000 sano ah, luul dalxiis oo Samarkand, Bukhara iyo Khiva - dhammaantood waa qiimo aad u jaban oo ajaanibta. Laakiin sidee wax u socdaan khamaarka? Su'aashan CasinoTopLists waxay kaga jawaabayaan qodobkan.
Sharciyada Uzbekistan ee khamaarka - taariikh taariikheed
Dareen xoog leh oo ku saabsan dabeecadaha khamaarka waddanka ayaa lagu soo rogay xaqiiqda ah in diinta rasmiga ah ee Islaamka. Islaamka dhexdiisa, khamaarka waxaa loo arkaa mid aan la aqbali karin.
2002 Mamnuucida bilyaariyada. Xilligan, xayiraadda ayaa la qaaday.
2003 Go'aanka № 314 "Bixinta shatiga ee abaabulka bakhtiyaa-nasiibka." Soo saarista waajibaadka gobolka ee shatiga xaddiga soddon iyo shan jeer mushaharka ugu yar.
2007 Madaxweynaha Jamhuuriyadda Uzbekistan # PP-608 Go'aanka "Tallaabooyinka lagula dagaallamayo falalka sharci darrada ah ee la xiriira abaabulka iyo dhaqanka khamaarka"
Khamaarista dhulka Jamhuuriyadda Uzbekistan waa mamnuuc. Marka laga hadlayo falalka khamaarka ee sharci darrada ah inta lagu gudajiro ka qeybgalka ciqaabta ciqaabta.
Khadka tooska ah iyo khadka tooska ah ee internetka ee Uzbekistan ayaa laga heli karaa. Soo galitaanka qasiisadaha ajnebiga ee khadka tooska ah ee internetka maaddaama ay sharci darro tahay oo lagu ciqaabi karo sharciga.
Khamaarka rasmiga ah ee la oggol yahay waa bakhtiyaanasiib xiiso leh. Waxaa jira dhowr nooc oo iyaga ka mid ah, dhammaantoodna ay dowladdu leedahay. Sida ciyaar sharci ah oo loo yaqaan 'Lotto' oo Ruush ah, taas oo ah wicitaan reer-galbeed ah oo loo yaqaan 'bingo'.
Si rasmi ah loo mamnuucay casinos-ka internetka. Laakiin maadaama waddanku uusan weli sameynin nidaam lagu xakameeyo bogagga noocan oo kale ah, markasta oo keliya dhowr darsin ayaa laga horjoogsaday kheyraadka. Boqollaal hadhay iyo xitaa inbadan oo ka mid ah goobaha shaqada ee caalamiga ah. Dhibaatooyinka ka-noqoshada ku guuleysiga boorsooyinka nidaamyada lacag-bixinta elektiroonigga ah lama arko.
Tallaabada mamnuuca ah looma tudhin, iyo ciyaaraha kombiyuutarka. Marka, sanadkii 2012 ee Uzbekistan waxaa lagu dhawaaqay aasaasida "Akadeemiyada ciyaaraha kombiyuutarka" oo horumarin doonta "ciyaaraha kombiyuutarka ee bulsho ahaan iyo qaran ahaanba muhiimka ah." Warbaahintii hore waxay soo warisay in waddanku naafo yahay dhowr farriimo deg deg ah oo caan ah, sida Skype, WhatsApp, «Agent Mail.Ru» iyo Telegram.
Bakhtiyaa-nasiibka ka sokow, waxaa jira xoog kale waqtiga ciyaarta - digaagga iyo eeyga dagaal. Waxay yihiin polulegalnymch.
Dhinac - kani waa madadaalo khamaaris, laakiin dhanka kale, ma jiro sharci cad oo mamnuucaya baashaalkan. Natiija ahaan, dadka reer Uzbekistan waxay u tixgeliyaan in si shuruudaysan loogu oggol yahay deegaan kasta waxaa jira ugu yaraan dhowr meelood oo aanad eegi karin oo keliya dagaallada, laakiin sidoo kale inaad ka dhigto sharad.
Jamhuuriyadda Uzbekistan - waa dal ku yaal Bartamaha Aasiya, oo deris la ah Kyrgyzstan, Afghanistan, Kazakhstan, Tajikistan iyo Turkmenistan. Qiyaastii 30 milyan oo qof ayaa ku nool gobolka. Luqadda rasmiga ah - Uzbek, laakiin inbadan ayaa sifiican uguhadasha Ruushka.
Uzbek - waa mid ka mid ah shucuubta Turkik ee kumanaan sano ku noolaa Aasiya. Laakiin aasaaska dawladnimada, Uzbekistan waxay bilaabeen in lagu rido qarniyadii VIII-VII BC, markii dhulkii casriga ahaa ee Khorezm iyo Bactria la aasaasay. Bactrian Princess Roxana xitaa waxay ahayd xaaskii Alexander the Great.
Qarniyadii VI-VII dhulalkii Uzbekistan waxaa xukumayey Turkic Khanate iyo Boqortooyadii Sassanid, iyo iyaga kadib - Khilaafada Carabta. Waxaa markii dambe la abuuray gobolka Samanid, laakiin waxaa la wareegay gobolka Khorezm, iyo markii dambe - Genghis Khan.
Qarnigii XIV, awooddu waxay ku jirtay gacanta Tamerlane. Horeba qarnigii XV wuxuu sameeyay dowladdii ugu horreysay ee Uzbekistan Sheibanids, qarni kadib wuxuu ku dhacay xukunka Ashtarkhanids, iyo qarnigii XVIII - Mangits. Kadib waxaa jiray xilligii Khanate ee Kokand, oo lagu jebiyey qarnigii XIX Boqortooyadii Ruushka.
Qarnigii labaatanaad dhulku wuxuu ka mid noqday USSR oo ahaa Uzbek Soviet Socialist Republic, 1991-dii dowladduna waxay heshay xornimo. Maanta waa jamhuuriyad madaxweyne, oo uu hogaaminayo Islam Karimov. Ra'iisul - Shavkat Mirziyayev.
Chorsu Bazaar . Cinwaanka: pl. Eski Juva, Tashkent. Tani waa mid ka mid ah suuqyada ugu faca weyn Bartamaha Aasiya, oo jirtay dhowr qarniyo, booskiisuna wali isma beddello. Markii hore, xitaa hoggaamiyeyaasha waaweyni iskama quudhin inay shakhsi ahaan booqdaan baarka.
Imam Square . Cinwaanka: pl. Imaam Hast, Tashkent. Waa xarun diimeed caasimada. Halkan ayaa ku urursan cibaadooyinka waaweyn ee diinta ee Uzbekistan: Masjidka Tilla Sheikh, Madrasah XVI qarnigii Barak Khan, Machadka Islaamiga ah. Imaam Bukhaari, isgaarsiinta Mausoleum. Abu Bakar Kaffal Shashi.
Masjidka Juma Juma . Cinwaanka: pl. Chorsu, Tashkent. Haddana waxaa loogu yeeraa masaajidka Juma. Dhismaha waxaa la dhigey sanadka 819 meesha ugu sareysa magaalada. Waa kan ugu da'da weyn dhammaan masaajidda ka badbaaday caasimadda.
Television Tower Tower . Cinwaanka: st. Amir Temur, 109, Tashkent. Dhismaha ugu sarreeya ee aan-warshadaha ahayn ee Bartamaha Aasiya, dhererkiisu yahay 375 m. Mid ka mid ah astaamaha Tashkent, oo laga arki karo meel kasta oo magaalada ka mid ah.
Kaniisadda Qadarinta ee Hooyo Ilaah . Cinwaanka: st. Avlioota, Tashkent. Dib-u-dhiskan dib-u-dhiska ee 1950-meeyadii, Kaniisadda Katidralka ah, oo la dhisay 1871. 1990-meeyadii, aagga ayaa la ballaadhiyey oo la xardhay.
Uzbekistan waxay leedahay 4th mugga mugga dahabiga kadib South Africa, Mareykanka iyo Russia.
Uzbekistan waa mid ka mid ah 5 wax soo saar ugu weyn ee suufka adduunka, oo ay weheliso India, Mareykanka, Shiinaha iyo Pakistan.
Dhammaan waddamada deriska la ah dalka waa bad la’aan.
Samarkand - waa magaalada ugu faca weyn Uzbekistan, da'diisu waa da'da Rome, waa qiyaastii 2750 sano.
In Uzbekistan, waxay ka shaqeysaa oo keliya Bartamaha Aasiya, tareenka dhulka hoostiisa mara. Waxaa la dhigay 1977.
Tashkent - waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu wasakhda yar adduunka, sidaa darteed cirka habeenku waa cad yahay oo waxaad si muuqata u arki kartaa xiddigaha.
0.2 Liiska Top 10 Goobaha Khadka Tooska ah ee Uzbekistan
3.0.1 Sharciyada Uzbekistan ee khamaarka - taariikh taariikheed